Waraanni Humna addaa Amaaraa Ammas gama Godina Oromoo wallootti konkolaataa hedduudhaan fe’amaa jira. – Kichuu
HomeNewsAfricaWaraanni Humna addaa Amaaraa Ammas gama Godina Oromoo wallootti konkolaataa hedduudhaan fe’amaa jira.
Waraanni Humna addaa Amaaraa Ammas gama Godina Oromoo wallootti konkolaataa hedduudhaan fe’amaa jira. Waraanni Qindaawa dheengadda halkan Ummata Oromoo wallootirratti baname har’as itti fofee kan oole yommuu ta’u iddoowwan Qalloo,Mulluqqee jedhamanii fi gandoota baadiyyaa heddu keessatti geggeeffamaa jira. Sababa kanaanis Ummanni buqqa’ee gar biroo baqachaa akka jiran jirattonni nuuf dhaaman.
Dabalataanis aangawoota Oromoo walloo keessaa Bulchaan aanaa Jiillee Dhummuugaa Obbo Jamaal Hasan BBC’tti akka himanittii gandoota aanichaa shan keessatti lolli adeemaa jira.
“Hawaasni keenya uummata qotee bulaati. Akka amma miidiyaadhaan lallabamu kanaa miti. ABO Shanee, warra gurmaa’e, meeshaa waraanaa ulfaataa wanti jedhamu hin jiru. Qotebulaadhaani kan wal lolamaa jiru. Manni qoteebulaa gubataa jira. Qotebulaan du’aa jira. Inni du’aa jiru kun immoo Shaneedha jedhameeti gabaasni kan irratti hojjetamaa jiru” jedhu.
Meeshaa Caccabaa baattee laga keessa Deemtii Dhaqaa Harkaan qabaa fidaa meeshaan Caccabaan sun har’a isnapara bireena hanga diishqaatti qabna ammoo Hundi Isaa wareegamaan dhufe dhiigaaf lafee beelaaf dheebuu baddaaf gammoojjiin waxalamnee biyyaa keenyaa oromiyaa saba keenyaa oromoo bilisoomsuf murannee jirra kanaaf loluun nuf diirqama oromummaati wantii akka waaraana bilisummaa oromoo ta’uun lubbu keenyaa takkitti jijjiirra hin qabne gamachuun sabaaf gumaachinee birmadumma biyyaa mirkaneesina.
Jaal Urjii Lola Keessa
Yeroo amma Lolli Cimuu irraan kan ka’e Qeerroo walloofi Ummaatni keenya wallop Daandii guddicha gara magaalaa kamisee geessu guutumatti cufuun lola Humna Addaa Naannoo Amaaraa waliin gaggeessa jiru..!!
Ummaatni Oromoo fi Qeerroo Godinaalee Oromiyaa hunda keessa jirtan Oromoo Walloof dirmadhaa…!!
እነ ዶር አብይ በመድረክ ላይ ማር ነው ካፋቸው ጠብ የሚለው…